Stationlọ ọrụ ikike ọdụ, ndị na - ebunye ya - China Power Station Valves Manufacturers
PV48 agụụ na-agbasa valvụ
Nkọwapụta :dị: ike nuklia na-agbaji valvụ Modeldị: ZKPHF41F-150 150Lb, ZKPHF21F-300 300Lb Ngosi ọnụ: DN 20-50 A na-eji ngwaahịa ahụ maka AP1000 unit dị ka akụrụngwa nrụgide nrụgide na-adịghị mma iji mebie akụrụngwa ahụ. 1.With mmiri ụdị agụụ decompression, agụụ na-agbasa valvụ atụmatụ mfe mgbe nile nsogbu na ịrụkwa na-adaba adaba nwụnye. Emere valvụ ahụ dị ka ọkwa ọ bụla na nrụgide ya ...
M60A agụụ na-agbasa valvụ
Nkọwapụta Typedị: ike nuklia na-agbaji valvụ :dị: JNDX100-150P 150Lb N'elu Ngwụcha: DN 100-250 Na-etinye aka na usoro condenser nke ọdụ ikike nuklia, ọ nwere mmetụ nrụgide na-adịghị mma, nrụpụta nrụgide dị mma na ọrụ mgbochi mmiri mmiri .1. valvụ na-agbaji, valvụ akpaka, achọghị mbanye ọzọ mgbe etinye ya n'ọrụ. Na nkịtị na-arụ ọrụ ala, na nkwonkwo ike nke mmiri na ọkara na-agba ọsọ na valvụ diski presses na valvụ d ...
Okpomọkụ na nrụgide na-ebelata valvụ maka obere uzo uzo
Detadị Nrụgide Mbelata Valve Model Y966Y-P5545V, Y966Y-P54.550V, Y966Y-P54.535V, Y966Y-P54.530V Nomba dayameta DN 200-450 Na-arụ ọrụ ọnọdụ nke elu okpomọkụ na nnukwu nsogbu na okpomọkụ iche, ọ adopts multi aka uwe maka nrụgide nrụgide na nkwụsị azụ mmeghe mmiri na-agba mmiri maka ịgba mmiri na mbelata mmiri iji mee ka ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide belata. Uru Uru bụ angular Ọdịdị a ...
Okpomọkụ na nrụgide na-ebelata valve maka nrụgide nrụgide dị elu
Nkọwapụta Typedị Mbelata Mbelata Ule Y966Y-P54.5140V, Y966Y-P55190V Nomba Dimita DN 125-275 O nwere ọnọdụ ọrụ nke nnukwu okpomọkụ na nnukwu nrụgide na esemokwu ọnọdụ okpomọkụ. Ọ na - anabata aka uwe dị iche iche maka mbelata nrụgide yana inyefe mmiri ọgwụ mmiri na - enye aka maka ịgba mmiri iji belata mmetụta nke ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide mgbali Uru Valve bụ usoro akụkụ na usoro ọhụụ na-aga ...
Pressure mbenata valvụ maka soot ịfụ adalata ebe nke ikuku tupu okpomọkụ
Nkọwa Typedị Mbelata Mbelata Mkpụrụ Model Y666Y-P55 80Ⅰ, Y666Y-1500LB Nomba Dimitrini DN 100 Mkpụrụ obi na-afụ ụfụ nke 600 na 1,000MW na-ekpo ọkụ ọkụ na-ewe nnukwu okpomọkụ na-eme ka uzu ọkụ dị ka soot nke ikuku ikuku. A na-ebelata nrụgide site na valvụ na-achịkwa maka ebe a na-ebelata soot na-ebelata ọdụ ụgbọ mmiri ma na-enye ya onye na-ekpo ọkụ dị ka soot nke ikuku ikuku. Uru ahụ valvụ ahụ na - ewepụta ịgbado ọkụ na ...
Pressure mbenata valvụ maka soot ịfụ adalata ebe
Nkọwa Typedị Mbelata Mbelata Ule Model Y669Y-P58280V, Y669Y-3000SPL Nomba dayameta DN 80 A na-eji ya maka usoro ihe ọkụkụ nke 600 ruo 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) thermal power unit ji esi mmiri ọkụ. Uru Uzo a na-eme ka aru uzo di elu na ike di elu ma megharia uzo uzo iji choo ike choro n'okpuru oke oku na nsogbu. Ọ nwere ịgbado ọkụ na ọkpọkọ. The valvụ s ...
Mmiri na-achịkwa valvụ maka nnukwu nsogbu uzo
Typedị Nhazi Valkpụrụ Valve Model T761Y-2500LB, T761Y-420 Nomba Dimitres DN 100-150 Ọ na-achịkwa okpomọkụ na-ebelata mmiri nke okpomọkụ na nrụgide na-ebelata valvụ maka nrụgide dị elu nke turbine. Site na ọnọdụ ọrụ nke nnukwu nrụgide na nnukwu nsogbu dị iche, ọ na - anabata ọnọdụ ọtụtụ ụzọ na - agba ọsọ iji gbochie omume cavitation na ọkụ ọkụ. Uru Valve bụ usoro akụkụ na usoro ntụgharị usoro bụ ...
Na-achịkwa valvụ maka uzo mmiri isi
Ildị gukpụrụ gukpụrụ Valve Model T668Y-4500LB, T668Y-500, T668Y-630 Ngular Diamita DN 300-400 A na-eji ya maka ọkpọkọ mmiri na-enweta mmiri nke 1000MW supercritical (ultra-supercritical) unit ji esi mmiri maka ịhazi usoro mmiri. Uru The valvụ bụ ogologo ụdị Ọdịdị, na-ajụ eruba direction bụ eruba ụdị na akara elu nke valvụ oche dị anya n'ebe ikpeazụ nzọụkwụ flash evaporation mpaghara na-ekwe nkwa ọrụ ndụ. Ahụ valvụ ...
Mgbapu mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ maka ikpo ọkụ ọkụ
Nkọwapụta Gatezọ Valzọ Valzọ Gatezọ Zdị Z964Y Nrụgide PN20-50MPa 1500LB-2500LB Nkọwapụta Ngosipụta DN 300-500 A na-eji ya dị ka mmeghe na mmechi ngwaọrụ maka usoro mgbapụta ma ọ bụ usoro ọkpọkọ nrụgide dị elu dị elu nke 600 na 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) uzuoku uzuoku. Uru nke ahụ na ọkpụkpụ na-eme ka ihe nkedo dị na etiti, na-egosipụta nkwụsị dị mma. Isi abụọ ahụ ejiri njikọta njikọta. The valvụ diski ...
Mmiri na-achịkwa ọkwa mmiri maka tank mmiri
Ildị Nkọwapụta Valkpụrụ Valve Model T964Y-420Ⅰ, T964Y-500Ⅰ, T964Y-2500LB Nomba Ngosipụta DN 250-300 A na-eji ya maka nhazi ọkwa mmiri nke tank mmiri nke 600 ruo 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) unit na iru nzube nke ịhazi. ọkwa mmiri nke tank mmiri site na oghere dị iche iche. Uru Uzo a bu ihe eji eme ya na ike di elu ya na ihe di elu ya na ihe di nma.
Valvụ mmiri maka uzuoku-mmiri usoro
Typedị Dradị inkpụrụ Valve Model PJ661Y-500 (I) V, PJ661Y-630 V, PJ661Y-P54290 (I) V, PJ661Y-P61310 V N'elu dayameta DN 40-100 A na-eji ngwaahịa ahụ maka sistemụ mmiri ọkụ nke mmiri ọkụ ma ọ bụ turbine steam nke ike kwes supercritical (ultra-supercritical) unit. Uru Uru ahụ valvụ ahụ na-ewepụta usoro adịgboroja niile. Alingdị akara nke ahụ valvụ ahụ na bonnet na-anabata usoro nrụgide nke onwe. Ebe akara nke oche oche nwere Stella 6 alloy ...
Hydraulic ụzọ atọ maka mmiri mmiri nke nrụgide dị elu
Typedị Threedị Threezọ Valzọ F7zọ F7zọ F7dị F763Y-2500LB, F763Y-320, F763Y-420 N'obosara N'obosara DN 350-650 N'oge arụ ọrụ nke nrụgide nrụgide dị elu nke 600 ruo 1,000MW supercritical (ultra-supercritical) thermal unit unit, isi ụzọ nke uzo ato di elu na uzo uzo okpomoku di elu meghere ma mechie uzo. Mmiri mmiri na-esi mmiri ọkụ na-abanye na kpo oku dị elu site na isi ụzọ tupu ịbanye na mmiri ọkụ ahụ site na valvụ ụzọ atọ dị elu ...